merolagani - नेशनल लाइफ इन्स्योेन्सको बोनस शेयर सूचीकृत
नेशनल लाइफ इन्स्योेन्सको बोनस शेयर सूचीकृत
Jul 07, 2019 02:57 PM Merolagani
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३५ लाख ७७ हजार १३२ कित्ता बोनस शेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको छ। कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट वितरण गरेको असार २२ गते आइतबार नेप्सेमा उक्त शेयर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सूचीकरण गराएको हो।
कम्पनीको गत चैत्र १५ गते शुक्रबार ३० औं वार्षिक साधारण सभाले शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको १३.५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही शेयर आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न मिल्ने गरी सूचीकरण गरिएको हो।
यसअनुसार साधारण सभाका लागि कम्पनीले बुकक्लोज गरेको चैत १ गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेप्सेमा कायम रहेका शेयरधनीले उक्त बोनस पाउनेछन् । यस्तै बोनस पाउने शेयरधनीले आइतबारदेखि उक्त शेयर खरिद बिक्री गर्न समेत सक्नेछन्।
दुई अर्ब ६४ करोड ९७ लाख रूपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकरण पश्चात चुक्ता पूँजी तीन अर्ब ७४ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
सिंगटी हाइड्रोको शेयर अर्को साता देखि कारोबारमा आउने, कति होला ओपनिङ्ग रेञ्ज?
Apr 22, 2021 01:34 PM
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयर यहि साताबाट कारोबारमा आउने, कहाँ पुग्याे सूचीकरण प्रकृया?
Feb 07, 2021 03:39 PM
चन्द्रागिरी हिल्सको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, ओपनिङ्ग रेञ्ज कति?
Feb 05, 2021 01:12 PM
चन्द्रागिरी हिल्सको शेयर लिस्टिङ्ग प्रकृया अन्तिम चरणमा, आइतबारदेखि कारोबारमा आउन सक्ने
Feb 04, 2021 11:58 AM
प्रभु लाइफको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत, आइतबारदेखि कारोबारमा आउने
Jan 01, 2021 01:18 PM